Oge ezumike oge ezumike
Ezigbo ndị ahịa na ndị mmekọ, Anyị ga-amalite ezumike anyị site na February 6th ruo February 21st, wee laghachi ụlọ ọrụ na February 22nd, 2021 Daalụ maka nkwado gị oge niile. Ndị ọrụ anyị niile nke Shanghai Dada Electric ga-achọ izitere gị ekele ekele na ...
Ihe ngosi 2020 Dubai MEE Power Gen
site ha na 21-01-15
N'ime ihe ngosi a, Dada na-eduzi ngwaahịa na teknụzụ kachasị ọhụrụ ma gosipụta usoro DAM3 ọhụrụ na usoro MCB NOVA. Anyị na-eyi ihe nkpuchi mgbe ngosi ahụ ma nabata ọtụtụ ndị ahịa. N'agbanyeghị ntiwapụ nke ọrịa na China, ...
127th online canton ngosi emezuru nke ọma
Shanghai Dada tinyere aka na 127th Canton Fair na 2020 Otu bụ usoro ikpo okwu ọhụrụ. Ebe nrụọrụ weebụ Canton Fair wepụtara iji gosi ngwaahịa anyị. Nke abụọ, teknụzụ ọhụrụ. Emebere ụlọ 10 × 24 maka ịgbasa ozi n'ikuku na oghere zuru oke, mmekọrịta siri ike yana iduzi iji mepụta ahịa dị ndụ ...
128th Canton Fair Live Broadcast 128tọ oge
Ihe ngosi 128th Canton Fair gosipụtara ọdịnaya ọdịnaya, anyị ga-enyekwu ọrụ ọdịnaya. Soro anyi maka Studio nke ndụ anyị - iji zụlite nghọta banyere etu ndị ọrụ njegharị sekit nwere ike isi rite uru site na nrụpụta. Oge mmeghe: 2: 00pm China oge 15 ruo 24 Ọktọba, 2020 Live studio: P HA EBE A Live ...
G ISN IS B D NKAT BR B N'etiti MCB, MCCB, ELCB, NA RCCB
site ha na 20-12-15
MCB (miniature circuit emebi) Njirimara • Rated current not over 125 A. • Njirimara njem anaghị adị mma. • Igwe ọrụ igwe ma ọ bụ nke na-ekpo ọkụ. MCCB (kpụrụ ikpe cir ...
Ọkpụkpụ ikpe Mbibi ihe ọmụma
Onye na-emebi ihe eletrik (MCCB) a na-akpụzi bụ ụdị ngwaọrụ nchedo eletriki nke ejiri iji chebe eletriki eletrik site na oke ugbu a, nke nwere ike ibute oke ma ọ bụ obere elekere. Site na ọkwa dị ugbu a ruo 1600A, enwere ike iji MCCBs mee ihe maka ọtụtụ voltages na frequencies ...
Nyocha ahịa MCCB
Kpụrụ Case Circuit emebi (MCCB) Market Global na Regional Analysis About kpụrụ Case Circuit emebi (MCCB) Industry Schneider Electric, ABB, na Eaton weghaara n'elu atọ ego ha ga enweta òkè tụrụ ke akpụzi Case Circuit emebi ahịa na 2015.Schneider Electric adịkwaghị 18.74 Ruru ...
Ihe ngosi 2020 MEE nke Dubai (Nguzo No.:H2 C30)
site ha na 20-10-15
Na MEE 2020 na-abịanụ, DaDa ji obi ụtọ na-akpọ gị ka ị bịa leta anyị n'oge Middle East Electricity 2019 na nguzo H2.C30 (Site na Mar.3rd ruo Mar.5th) na Dubai World Trade center, anyị ga-egosipụta nghazi ụlọ ọrụ anyị ma nwee ndị otu anyị guzoro iji nyere gị aka na ozi ọ bụla ịchọrọ ...
Ihe ngosi 128th Online Canton
Na 128th Online Canton Fair nke na-abịanụ, DADA ga-achọ inyere gị aka iji nweta ebumnuche ahịa gị site na ịnye gị Ngwọta zuru ezu na Creative CIRCUIT. The Ministry of Commerce: Nzukọ nke 128 nke Canton Fair mere ndokwa n'ịntanetị site na October 15 ruo 24th. Minis ...
Daalụ maka ileta anyị na ngosipụta 125th Canton
site ha na 19-11-10
126th Canton Fair ụlọ ndò Nke 11: 11.3K37-38
site ha na 19-08-21
Obi oma ga-asian na na-abịa 126th Canton Fair nke jide na China, anyị ụlọ ntu Nke bụ dị ka ndị: ụlọ ọrụ aha: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd AKWIRKWỌ AKW NOKWỌ NO: 11.3K37-K38 Show TIME: Ọkt. 15th - Oct.19th AHIR AHIR: China Canton Fair Nnọọ na ụlọ ntu anyị iji kparịta azụmahịa.
Iran Ike ngosi
site ha na 19-05-17